Nakulokhu iPhasika alibe wukutshaleka kwethemba - Bayede News
AbangamaKhrestu njengazo zonke izinkolo kukhona abangakwenza
Emakhulwini ngamakhulu amaKhrestu kuleli nasemhlabeni jikelele lena yimpelasonto engcwele. Yilapho ukholo lwawo luvuseleleka. Ngokwemibhalo yabale nkolo lena yimpelasonto yokuvuselelwa kwethemba, ukwedlula ekhasini elidala nokuqalwa kokusha. Kubo ukufa kuwukuvuka, kuwukwesuka kokudala. Ngeshwa nakulo nyaka lesi sikhathi sifika lapho izwe nomhlaba jikelele bebhekene nengwadla yokhuvethe. Ubuhlungu obulethwe yilo mkhuhlane emindenini, emphakathini kanye nasezizweni ezahlukene kungelinganiswe. Okomnotho-ke khona akubalwa. Izibalo zabangasebenzi kanye nokuguqa kwezimboni ezahlukene kuwubufakazi besimo esinzima nesidalwe wukubhebhetheka kwalo mkhuhlane.
Ngokusho kongoti lesi simo sisazoqonga, ukufa lokhu kusikakile. Lesi simo sibeka emahlombe ethu sonke ingcindezi yokuthi kumele kube khona esikwenzayo. AmaKhrestu kuleli maningi, lesi sibalo abanaso singaba yikhambi ekudodobaliseni lo mkhuhlane. Lolu bizo kalulusha kumaKhrestu ngoba nangezikhathi zobandlululo, isikhathi sezifo nezimpi ayesekhaleni lokududuza nokuhlumelelisa imiphakathi eyahlukene.
Siyanxusa ngezenzo ukuba amaKhrestu kulo lonke leli abe ngababhebhethekisi bethemba. Kusuka ezintshumayelweni kuya ekulandeleni imithetho yezwe ebhekene nemizamo yokududula ukhuvethe. Siyakholwa ukuthi amaKhrestu lokhu azokwazi ukukwenza ngenxa yezibalo zabantu abalandela le nkolo kanye nekhono lokukwazi ukusabalalisa imiyalezo.
Siyakuqonda ukudumala kwabanye abangeke babe yingxenye yezinkonzo ezahlukene ezweni. Nokho sinethemba lokuthi isimo bayasiqonda nokuthi sebenawo amava abaholi bamabandla okusabalalisa izintshumayelo nemiyalezo ngezindlela zesimanje okwenza abantu bangakhali ngokwemukwa ithuba lokulalela izinkonzo.
Nakulabo abaya ezinkonzweni sinxusa ukuthi bangabi namawala bashayele kahle baphephe baphinde baphephise nabanye lapha ezindleleni. Lokhu amaKhrestu angakwenza, angenza izinkonzo zalo nyaka zikhumbuleke ngokutshala ithemba kubantu.